OEM & ODM Solar Charmy Controlloller စက်ရုံ, Solar Charm Charge Controller နှင့် Solar Charm Charge Controller ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Ocean Dream စီးရီး PWM နေရောင်ခြည်အားဖြင့်ချုပ်ဆို Controller
သမုဒ္ဒရာအိပ်မက်စီးရီး (အတိုချုပ်အတွက် OD) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော pwm solar controllers ဖြစ်သည်။ CPOLERS ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အတွင်းပိုင်း 32 ကီလိုမီတာရှိသော CPU တွင်၎င်း၏အထူးတည်ရှိသည်။ 4UB-port နှင့် screw driver အတွင်း၌0င်ရောက်ခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအနက်ရောင်&Red Big Terminal Design သည်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုအမှန်တကယ် application တွင်ကူညီသည်။ သင့်အိမ်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်နေရာချထားပါကပင်ဖြူနှင်းခဲသောပလတ်စတစ်ခွံသည်အလွန်သဘာဝဖြစ်သည်။ဒီမှာနှိပ်ပါဒေတာများကို download လုပ်ပါ
Sky Dream Series (SD SD) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော PWM နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစင်တာများဖြစ်သည်။ CPOLERS ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အတွင်းပိုင်း 32 ကီလိုမီတာရှိသော CPU တွင်၎င်း၏အထူးတည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအနက်ရောင်&Red Big Terminal Design သည်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုအမှန်တကယ် application တွင်ကူညီသည်။ ၎င်းကိုပိုမိုမြင့်မားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကျော်စံ။ဒီမှာနှိပ်ပါဒေတာများကို download လုပ်ပါ
SD60s ပေးသွင်းသူနှင့်အကောင်းဆုံး OD60s အကောင်းဆုံး
SD60s ပေးသွင်းသူနှင့်အကောင်းဆုံး od60s အကောင်းဆုံး။၎င်း၏မြင့်မားသောအရောင် rendition စွမ်းဆောင်ရည်သည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအလင်းဖြန့်ဖြူးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အရိပ်အခမဲ့အလင်းရောင်ပတ်0န်းကျင်ရှိသုံးစွဲသူများကိုအသုံးပြုသူများအားအသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေစေသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
LDSolar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသမုဒ္ဒရာအိပ်မက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller (20210ယ်သူများလမ်းညွှန်)
LDSolar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသမုဒ္ဒရာအိပ်မက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller (20210ယ်သူများလမ်းညွှန်)ဤဗီဒီယိုတွင်အိုသမုဒ္ဒရာအိပ်မက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအားသွင်းစက်ကို Ldsolar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (20210ယ်သူများလမ်းညွှန်) မှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုခံစားကြည့်ပါ ဦး ။Wuhan သည်ယခင်က Wuhan ဂဟေဆော်အဖြစ်လူသိများသောစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သစ်ကိုဂဟေဆော်သည်&T ကပူးတွဲ, Ltd. သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်&D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအ0ယ်များနှင့်သာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထိန်းချုပ်သူများသာထုတ်လုပ်သည်။ စက်ရုံသည် Wuhan စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် GRID နေအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်အဆင့်မြင့် ldsolar controller များကို install လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။မှတ်ပုံတင်ထားသောအမှတ်တံဆိပ် Lddsolar ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပစ္စည်းများမှာ -မြေယာအိပ်မက်စီးရီးစီးရီးများဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော Pwm Solar Controllers များနှင့်သမုဒ္ဒရာအိပ်မက်စီးရီးများပါဝါနှင့်အတူ 10A မှ 60A, ဗို့အား 12V-24V,2, Tracer Dream Series မှကိုယ်စားပြုသော MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစင်တာများသည် 15A မှ 80 နှင့်ဗို့အားမှာ 12V-24V-48V ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသော 32-bit ချစ်ပ်များနှင့်မျိုးဆက်သစ်များကို Self-Developmed MPPT algorithm ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Solar Panels ၏အသုံးချမှုနှုန်းသည် 20% မှ 30% အထိထိထိရောက်ရှိရှိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မားစွာတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ဖောက်သည်များအပေါ်အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Controller များကိုအသုံးပြုသောအခါ ISO9001 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသေချာစွာလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ် standard en62109 နှင့်အညီလိုက်နာရန်, တင်းကျပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များ၏ 99.9% ကျော်နှင့်အလွန်မြင့်မားသောဖောက်သည်ကျေနပ်မှုLDSolar Controller ကိုသုံးပါ,အီးမေးလ် - info@ldsolarpv.comငါ့သူငယ်ချင်းကျွန်ုပ်၏0က်ဘ်ဆိုဒ် - https://www.ldsolar.comငါ့ကို Facebook တွင်ထည့်ပါ။ https://www.facebook.com/10559316476687777ငါ့ကို YouTube တွင်ထည့်ပါ။ https://www.youtube.com/channel/ucjvuuipwumbhumprumpr.qfpkdqLinkedIn တို့ပေါ်မှာငါ့ကို Add: https://www.linkedin.com/in/%E4%BC%9F-%E5%BB%96-1779322LDSolar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသမုဒ္ဒရာအိပ်မက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller (20210ယ်သူများလမ်းညွှန်)သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။# သမုဒ္ဒရာ # အိပ်မက် # နေရောင်ခြည် # တာဝန်ခံ # Controller # Ldsolar # ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း # (2021 # ဝယ်လက် # လမ်းညွှန်) # နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး # controller ကို # ldsolar # solarcontrollerldsolar # 1kwsolarsystemprice # mpptsolarchargecontrollermatlab # flightcontroller # 9voltkebatterykogharperchargekarnekaaasantarika # minifacialcleanerdaoceane
sd30s vs od30s
SD30s vs od30s ။ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်နိုင်ငံတကာ ဦး ဆောင်အဆင့်ဖြစ်သောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအပေါ်အခြေခံသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် od30s ပြည်တွင်းရေးယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် oD30s ပြည်တွင်းရေးယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ။ထိုထုတ်ကုန်ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုစောင့်ရှောက်မှု, မသန်စွမ်းမှု, မသန်စွမ်းမှု,ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အကောင်းဆုံး OD စီးရီးထုတ်ကုန်ပြသမှုစက်ရုံစျေးနှုန်း -
od 合辑။ ပတ္တူ, အဆင့်မြင့်ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ရော်ဘာများနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားအတွက်ကဲ့သို့အချက်များအပေါ်လုံးဝမှီခိုသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
od 设置 - 提升提升။အမျိုးသား output ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကများအတွက်အကောင့်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအား။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အနိမ့် voltage reutonnection voltage (LVR) ကိုသတ်မှတ်ရန် ODOVE?
od 设置 - 欠压欠压။ဤစူပါဇိမ်ခံပစ္စည်းသည်ဂန္ထဝင်စတိုင်နှင့်ကြော့ရှင်းမှုကိုအိပ်ခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးရာသီနှစ်သိမ့်မှုကမ်းလှမ်းခြင်း။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Professional Odow အနိမ့်ဗို့အား disconnect voltage (LVD)? ထုတ်လုပ်သူ
Professional Odow အနိမ့်ဗို့အား disconnect voltage (LVD)? ထုတ်လုပ်သူ။ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ခုလုံးသည်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများနှင့်အညီ,ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ